16 / 04 / 2020 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Abriil 16, 2020
Daqiiqadihii ugu dambeeyay ..! Laba Metrobus Collide Madaxa-ilaa-madaxa ee Avcılar!
Laba metrobus ah ayaa isku dhacay madax-ilaa-madaxa Avcılar. Shilka dartiis, adeegyada metrobus ayaa ku joojiyay laba jiho. Booliska iyo kooxaha caafimaadka ayaa goobta loo diray. Qoraalka lagu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka Radyo Pazarlama, “100 İBB [More ...]
Halganka lagula jiro faafitaanka Covid-19 iyo isbadallada ku xiga ayaa lagaga wada hadlay shirkii ugu horeeyey ee taxanaha Webinar oo cinwaan looga dhigay “Wtechtalks New World Order” oo ay soo qaban qaabisay Ururka Haweenka ee Tiknolojiyadda. Zehra, Gudoomiyaha Ururka Haweenka Ururka Teknolojiyada [More ...]
Imamoglu: geesiyaal gaadiid sido geesiyaal caafimaad
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu booqday darawalada metro iyo taraamyada kuwaas oo sii waday shaqeynta maalmaha adag. İmamoğlu wuxuu yidhi, Waxaan isku dayeynaa inaan bixinno adeegyo gaadiid. Adeegga gaadiidku wuxuu leeyahay geesiyaal, waad tahay. ” ayuu yiri. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Mareykanka: tijaabinta gantaalaha lidka-Satellite-ka
Taliska Cirka Mareykanka (USSPACECOM) ayaa ku dhawaaqay Abriil 15, 2020 in Russia ay tijaabisay oo ay raacday gantaaladii anti-satalaytka (DA-ASAT). Waxaa qoray Taliyaha Ciidamada Cirka Mareykanka General John W. Raymond [More ...]
Fursadda Istanbulbulkart ee Xirfadlayaasha Caafimaadka
IMM waxay sameysay gaadiidka dadweynaha iyo baabuurta loo yaqaan 'ISPARK' baarkinno lacag la’aan ah oo ay siinayaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka kuwaasoo adeegyo muhiim ah ka siiyay dagaalka lagula jiro coronavirus bishii Maarso 19. Shaqaalaha aan haysan aqoonsi shirkadeed, sida farmashiistayaasha, ayaa hadda ka faa'iideysan kara codsigan. [More ...]
Dukumintiga Gawaarida Badda, Shaqaalaha Badda iyo Shirkadaha ayaa la kordhiyay muddo 3 Bilood ah
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa ka qeyb galay shirkii Golaha Badda ee TOBB oo ay la yeesheen Muqaal. Isagoo halkaa ka hadlaya, Wasiir Karaismailoğlu wuxuu wax weyn ku soo kordhiyey warshadaha badda Turkiga iyo ganacsiga Golaha Ganacsiga Badda. [More ...]
Xamuullada waxaa lagu qaadaa tareenka iyada oo aan lala xiriirin dadka
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Karaismailoğlu, isagoo caddeeyay in dhammaan mawduucyada iyo safarada gobolka lagu joojiyay jidadka tareenka gudahooda marka la eego baaxadda Coronavirus (Covid-19), "Sidaa darteed, sida howlaha rakaabku u kala goynayaan tareenadeena, awoodda loo qoondeeyay gaadiidka xamuulka ayaa la fasaxay. [More ...]
Gaadiidka Caafimaadka leh ee Geedi socodka Buuxinta Khadka Denizli Card
Nidaamka buuxinta kaarka ee 'Denizli Card' ee khadka tooska ah, oo ay Denizli Magaalo Weyne ka bilowdey sanadkii hore, ayaa gaartay 280 kun lambarada rarida, halka lagu dhawaaqay in nidaamka rarka aan lala xiriirin uu muhiim u yahay baaxadda Kovid-19. Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli, gudbeysa [More ...]
Saadka logistikada ISD waxay kordhisay maraakiibta iskuxiran 5 jeer!
Sababo la xiriira cudurka 'coronavirus' (Covid-19) dartiis, hoos u dhaca ku yimid irdaha xuduudaha, kastamyada iyo wareejinta dalka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay gaadiidka caalamiga ah. Bixiya adeegyada saadka ee Turkey iyo waddamada Yurub in ISDA Logistics [More ...]
Shaqaalaha ka shaqeeya Diyarbakır Mardin Mazıdağı Railway Construction in Action
Shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha tareenka ee warshaddii Eti copper Factory ee Cengiz Holding ee Mardin looma gayn warshada maalin kadib markay shaqada joojiyeen. Kadib shaqaaluhu waxay bilaabeen fadhiisinka. Sida ku cad warkii ka soo baxay Universal; "dhexmaray [More ...]
Soosaarida Sery ayaa laga bilaabi doonaa Maqaalka Maska Gudaha
2 R&D waxay isku mar ka fuliyeen Xarunta T ResearchBİTAK Marmara Research Center (MAM) Machadka Qalabka Teknolojiyada Iskuduwaha Imtixaanka Qaranka iyo Xarunta Cilmi baarista (ITU MEM-TEK) ee goobta lagusoo bandhigayo miirayaasha maaskaro caafimaad. [More ...]
Hawsha ayaa Dardar Galineysa Gunnada Shaqada Yar
Qoyska, Wasiirka Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra sumurud Selcuk, Turkey oo ay ku jiraan tallaabooyin dhaqaale ka dhanka ah fikirka coronavirus faafa Golaha Qaranka ee Grand ka ahaa war muhiim ah oo ku saabsan soo jeedinta sharciga. Nolosha shaqada ee soojeedinta sharciga [More ...]
Isbeddelka saacadaha Baska ee usbuuca fasaxa ee Bursa
Burulaş wuxuu shaaca ka qaaday inuu isbedel ku sameeyay adeegyada basaska sababtuna tahay bandoowga oo ka dhici doona 31 gobol oo ay ku jiraan Bursa dhamaadka todobaadkan. Saacadaha Xaddidan Ee Basaska Intii U Dhaxaysay 18.04.2020 -19.04.2020 D / 2-A ŞEVKET YILMAZ [More ...]
Soo Bandhigga Taariikhda Cusub ee Warshadaha ayaa lagu shaacin doonaa bisha Juun
Taariikhda cusub ee Bandhigga Kaabayaasha Wershadaha Tareenka ee Bandhigga Kaabayaasha iyo Teknolojiyada, oo loo qorsheeyay in lagu qabto Eskişehir inta u dhexeysa 14-16 Abriil iyo dib loo dhigay sababo la xiriira tallaabooyinka Covid-19, ayaa lagu dhawaaqi doonaa bisha Juun. Ku saabsan carwada in la qabto 2020 [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ku socda ee Kayseri ma imaan doono Sanadkan
İYİ Party Kayseri Golaha Magaalo Weynaha Magaalada xubin iyo gudoomiye kuxigeenka kooxda Kazım Yücel ayaa ka horyimid guuldaradii ahayd in tareenka xawaaraha sare u keenay Kayseri uu yiri, "Kayseri waa magaalo ay Ankara ciqaabtay." Xisbiga IYI Kayseri Magaalo-Weyne [More ...]
Laba duullimaad oo garoonka diyaaradaha Atatürk ayaa si aan caadi ahayn looga dhigay!
Kuxigeenka ChP Istanbul Özgür Karabat wuxuu cadeeyay in labo waddo-socod ay noqdeen wax aan macquul aheyn inta lagu gudajiray dhismaha cisbitaalka faafa, kaasoo la bilaabay in laga dhiso garoonka diyaaradaha Atatürk, “Kharashaadka tani waa 2 bilyan doolar. Intaa waxaa dheer, gobolka ka ma jiro kaabayaal ” [More ...]
Dowladda Hoose ee Döşemealtı Waxay cabbirtaa Fayraska Corona Virus Meel kasta oo Magaalada ah
Degmooyinka Döşemealtı waxay ku wadataa wacyigelinta iyo ka hortaga halista ah ee xawaaraha buuxa iyada oo qayb ka ah dadaallada la qaaday iyada oo ay ugu wacan tahay nooca cusub ee cudurka 'coronavirus' (Covid-19). Kooxaha nadiifiya dhammaan qaybaha degmada ku dhawaad ​​iyo ku dhawaad ​​Halil laambadihii ugu horreeyay ee subaxdii [More ...]
Goobta Dhismaha Wadada Waqooyiga Marmara waxay u noqon doontaa Buug loogu tala galay Shaqaalaha
Xisbiga Jamhuuriga ee Xisbiga (CHP) Kuxigeenka Kooxda, Sakarya Kuxigeenka Engin Özkoç wuxuu keenay xaalada boqolaal shaqaale ah oo ka shaqeeya xaalado aan nadaafad aheyn goobta dhismaha Wadada Waqooyiga Marmara ajandaha Golaha. Özkoç, oo lagu qabtay shirka jaraa'id iyo Golaha Guud [More ...]
14 Duullimaadyo ah oo loo duulayo Shaqaalaha Sabtida iyo Axadda ee Antalya ayaa la heli doonaa
Dowladda hoose ee Antalya waxay qorsheyneysaa inay gaadiid dadweeyne siiso shaqaalaha daryeelka caafimaadka, shacabka iyo shaqaalaha kale, kuwaas oo ku qasban inay ka shaqeeyaan xadka bandowga 2-maalmood, kaas oo la dhaqan gelin doono dhamaadka usbuuca. Wadada 2-maalin [More ...]
3 Wadooyin Kale oo Loogu Talagalay Gaadiidka in loo qaado Jaamacadda Kocaeli
Jidka weyn ee D-605 ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka waaweyni wuxuu kuxiran doonaa taraafikada sababta oo ah shaqada dhaqan galinta ee kala goynta buundada Kocaeli ee Jaamacada. Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waa ku meel gaadh ahaan gaadiidka dadweynaha iyo gawaarida gaarka loo leeyahay ee adeegsanaya gobolka. [More ...]
Arkooyinka loo yaqaan 'Arkas Logistics' waxay ku fulisaa Motto-ka Howlgallada Tareenka
Arkas logistics, oo leh mowqifka "Howlgalka La-Xiriirka", waa maalmahan halka adduunku uu kula dagaallami lahaa fayraska COVID-19, iyo gadiidka tareenka, oo baahidiisu kor u kacday dhibaatooyinka la soo dersay waddada iyadoo uga mahadcelineysa maalgelinta tareenka ee ay sameysay muddo dheer. [More ...]
Karaismailoğlu ayaa Sharaxay Tallaabooyinka iyo Dhaqan-galyada Lagu Qaaday Khadadka Wadada Tareenka
Karaismailoğlu wuxuu ka hadlay tillaabooyinka iyo dhaqanada cusub ee lagu qaaday khadadka tareenka ee ka dillaacay Kovid-19. Isagoo xasuusinaya in safarada isgoysyada lagu xayiray marxaladda koowaad si looga hortago faafitaanka faafa, Karaismailoğlu, oo ku socota xawaare sare, tareeno waaweyn iyo kuwa maxalliga ah [More ...]
RayHaber 16.04.2020 Warbixinta Shirka
UIC-60 Scissor iyo Selet Lix Baloog Balaastiig ah oo loogu talo galay maqasyada Ankara Eskişehir YHT Line Dhismaha Dhismaha Taageerada Belt S-49 Scissor iyo Pads Sub-Selet Pads oo loogu talagalay maqasleyda [More ...]
Digniinta Bandowga ee laga soo saaray 11 Badhasaab Magaalo-madaxeed ee CHP
11 Maayarada Magaalo Weyn ee CHP ayaa mar labaad ka digay si aysan u qaadin tillaabooyin aan laga beddeli karin oo lagula dagaallamayo dillaaca COVID-19, iyo in go'aannada saxda ah la gaaro waqtiga saxda ah. Madaxweynayaal, aqoonyahanno badan, [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay diyaarisay qorshe gaadiid oo lagu soo rogayo bandowga kaasoo la dhaqan galin doono dhamaadka usbuuca. Basaska ESHOT, metro iyo İZBAN waxay adeegyo gaadiid dadweyne u fidin doonaan dhammaan kooxaha xirfad u leh inay shaqeeyaan. ee Izmir [More ...]